जापानमा अध्ययन गरौं | アクセス日本留学 - विदेशी विद्यार्थीहरूको लागि जापानमा विदेश जाने (अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी) अध्ययन गर्नका लागि जानकारी
जापानमा अध्ययन गरौं
जापानमा अध्ययन गर्नुहोस्
जापान धेरै पहाड र समुद्री घेरिएको एक धनी प्राकृतिक देश हो।
मौसमको अनुसार विभिन्न परिदृश्यहरू, पारंपरिक संस्कृति जस्ता मंदिर, किमोनो, सुलेख, जापानी भोजन र त्योहार, एनिमेशन, मंगा, cosplay आदि जस्ता पप संस्कृतिमा जापानमा विभिन्न आकर्षणहरू छन्।
के तपाईं जापानमा जापानी आकर्षणको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ जहाँ विश्वमा अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण र शान्त जीवन बिताउने छ?
जापानमा अध्ययन निश्चित रूपमा तपाईंको लागि एक विशेष अनुभव हुनेछ।
जापानको आधारभूत जानकारी जापानको आधारभूत जानकारी
आधिकारिक देशको नाम
126.67 मिलियन (2017 को अनुसार)
377, 972.28 km
यो भनिएको छ कि जापान एक देश हो जहाँ चार मौसममा फरक फरक देखिन्छ।
वसन्त (मार्चदेखि मई) औसत तापमान 12 डिग्री सेल्सियस
मौसम जब उज्यालो हुन्छ र खर्च गर्न सजिलो हुन्छ।
चेरी फूलहरू खिलमा छन् किनकि, तपाईं चेरी-ब्लासोम हेर्नको आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ।
समर (जून-अगस्त) औसत तापमान 23 ℃
यो सिजन हो जब तापमान बढ्छ र तातो दिन जारी छ जस्तै वर्षा जारी छ र वर्षा वर्षा पछि तापमान घट्छ।
जापानमा विभिन्न ठाउँहरूमा फायरवर्क उत्सव आयोजित छ।
पतन (सेप्टेम्बर-नोभेम्बर) औसत तापमान 16.4 ℃
सिजन गर्दा गर्मी नरम हुन्छ र जीवनको आसानी फर्काउँछ।
रूखको रङ परिवर्तन गर्न सुरु हुन्छ, र तपाईं केवल यो अवधिमा विशेष परिदृश्यको आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ।
जाडो (डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरी) औसत तापमान 4.9 ℃
तापमान राष्ट्रव्यापी र हिमपात धेरै स्थानहरूमा हुन्छ।
त्यहाँ थुप्रै पर्वतहरू छन् र तपाईं स्कीइङ जस्ता जाडो खेलहरू रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ।
जापानमा सामान्य क्षेत्रीय श्रेणीको रूपमा होक्काडोडो, ताहोको, कान्टो, चबु, किन्की, चीन, शिकोको र क्युसुूमा आठ क्षेत्रहरू छन्। राजधानी "टोक्यो" कोन्टो क्षेत्रमा छ।
जापानमा विश्वविद्यालयमा जानको लागि स्थान पत्ता लगाउनुहोस्। !
तपाईं हालैमा भाग लिन स्कूल बाट स्नातक भएपछि कस्तो प्रकारको सोच छ?
जापानी राजधानी (टोक्यो) भन्दा अन्य स्नातक विद्यालयहरू, विश्वविद्यालयहरू (विभागहरू), जूनियर कलेजहरू र व्यवसायिक स्कूल ।
जापान 47 नगरपालिकाहरू (47 पूर्वनिर्धारितहरू) बाट बनाइएको छ, तर यसको क्षेत्र, जलवायु, जनसंख्या, उद्योग र त्यसमा क्षेत्र अनुसार भिन्न हुन्छ।
यहाँ, हामी प्रत्येक जिल्लाको विशेषताहरु संक्षेप गर्छौं, त्यसैले कृपया जाने कहाँ पत्ता लगाउन प्रयास गर्नुहोस्।
चीन · शिकोकू
Kyushu · ओकिवावा
जापानी हाइस्क शैक्षिक संस्थाहरू र संख्याहरू
जापान मा उच्च शिक्षा संस्थाहरु, "स्नातक," "विश्वविद्यालय," "जुनियर", "पेशेवर विश्वविद्यालय," " व्यवसायिक स्कूल ," "उच्च व्यवसायिक स्कूल छ प्रकार वहाँ एक छ"। साथै, सञ्चालन गर्न निगम द्वारा, यो "राष्ट्रिय", "सार्वजनिक," "निजी" मा वर्गीकृत छ। स्नातक स्कूल, उच्च व्यवसायिक स्कूल , चार शैक्षिक संस्थाहरू मा, प्राथमिक मेरो घर देशमा, यो माध्यमिक शिक्षा को 12 वर्ष पूरा गरेको छ कि अवस्था बन्दछ हुनेछ शिक्षा बाहेक।
मास्टर डिग्री संग विश्वविद्यालय
5 99 स्कूलहरु (86 स्कूलहरु / सार्वजनिक विद्यालयहरु 78 स्कूलहरु / निजी स्कूलहरु 435 स्कूलहरु)
विश्वविद्यालय डक्टलल कोर्स
455 स्कूलहरु (77 स्कूलहरु / सार्वजनिक सार्वजनिक 61 स्कूल / निजी 317 स्कूलहरु)
86 86 स्कूल / सार्वजनिक90 स्कूल / 604 निजी स्कूल
जूनियर कलेज337 स्कूलहरू
190 स्कूल / सार्वजनिक 17 स्कूलहरू / निजी निजी विद्यालयहरू
व्यावसायिक कलेज / जूनियर कलेज16 स्कूलहरू
निजी व्यावसायिक विश्वविद्यालय 13 स्कूलहरु / निजी निजी कलेजियर कलेज3स्कूलहरु
व्यवसायिक स्कूल3,172 स्कूलहरू
99स्कूलहरू / सार्वजनिक जन 188 स्कूलहरू / निजी विद्यालयहरू 2, 975 निजी हुन्
व्यवसायिक स्कूल कलेज57 स्कूलहरू
51 स्कूल / सार्वजनिक3स्कूलहरू /3निजी विद्यालयहरू
स्रोत: शिक्षा शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान र प्रविधि Heisei29 "स्कूल मूल सर्वेक्षण"
※ जून 192018 को रूपमा स्कूलहरूको संख्या
※ वर्षको वर्षबाट शुरु हुने नयाँ स्थापित विशेष विश्वविद्यालय / जूनियर कलेजहरूको लागि, "एफवाई 2009मा खोलिएको अनुसूचित शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान र प्रविधि मंत्रालयहरू विश्वविद्यालयका सूचीहरू आदि स्वीकृति आवेदन" हेर्नुहोस्।
जापानमा अध्ययनका प्रकारहरू
सरकारी छात्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू
जापानी सरकार छ पढाई शुल्क र बिबिध · यो जीवन बिताउने खर्च, यात्रा खर्च, एक छात्रवृत्तिको रूपमा यात्रा खर्च फिर्ता गर्न एक प्रणाली हो। विश्वविद्यालयहरू द्वारा दूतावास र नामांकनहरू द्वारा नामांकनहरू छन् भने, कृपया तपाइँको गृह देशमा जापानी दूतावास / वाणिज्य दूतावास वा तपाईंले भर्ना गर्न चाहनुभएको जापानी विश्वविद्यालयलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
निजी रूपमा वित्त पोषित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी
Distillate पढाई शुल्क र बिबिध आफैलाई लागि तयार, उच्च शिक्षा संस्थाहरु वा जापान जापान जापानी स्कूल मा जाने बाटो छ। एक शर्तको रूपमा, विभिन्न छात्रबृतिको व्यवस्था प्रयोग गर्न सकिन्छ, जापान विद्यार्थी सेवा संस्था (जेसीएस) सहित।
यो एक जापानी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न एक प्रणाली हो जसले यसको विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गर्दछ। विश्वविद्यालयको आधारमा, प्रेषण गर्ने अवस्थाहरू र अध्ययनको पढाई शुल्क र बिबिध हस्तान्तरण फरक फरक छ, त्यसैले पहिला हामी तपाइँलाई सहभागी हुन कलेजलाई सोधौं।
विदेशमा छोटो अध्ययन
छोटो अवधि अध्ययन विदेशमा धेरै हप्तासम्म धेरै महिनासम्म अध्ययन गर्दैछ। तपाईंको घर विश्वविद्यालयमा कार्यक्रमहरू छन् त्यहाँ त्यहाँ छन्, तर विदेशी अध्ययन एजेन्टहरू प्रयोग गरेर जापानमा स्कूल कार्यक्रमहरूमा आवेदन गर्दै विभिन्न तरिकाहरू छन्।
निजी / स्नातक स्कूलक्योटो प्रिफेक्चर
आईटी र व्यवस्थापन सिक्नुहोस्, उन्नत सूचना प्रविधि विशेषज्ञहरू अर्को अग्रेषणको नेतृत्व गर्नुहोस्!
निजी / विश्वविद्यालयक्योटो प्रिफेक्चर
अप्रिल 2018 ले अन्तर्राष्ट्रिय योगदानको संकाय खोल्यो। निश्चित भाषाको कुशलता र समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हासिल गर्न वास्तविक सिकाउने
क्योटो सेकि विश्वविद्यालयले प्रत्येक व्यक्तिको विविधताको आदर गर्दछ। क्यूटोमा संस्कृति र इतिहासको पूर्ण कुरा सिक्नुहोस्!
निजी / विश्वविद्यालयआइचि प्रिफेक्चर
"मनोविज्ञान" "खेल" "जानकारी" "वातावरण" "व्यापारिक जानकारी" को बिन्दु दृष्टिकोणबाट जान्नुहोस्
ZEN तपाईं र तपाईं जेन र शिक्षा छ कि हृदय आकृति छ।
निजी / विश्वविद्यालयटोक्यो
विश्वव्यापी विश्वव्यापी विश्वविद्यालयमा योगदान
व्यवसायिक स्कूलक्योटो प्रिफेक्चर
स्नातकोट कटौती गर्दै छन्! पाँच लाइबेरियल आर्ट्स विभागलाई राम्ररी सिक्न सकिन्छ!
स्कूल खोजी स्कूल खोजी
जापान मा अध्ययन को बारे मा जानकारी खोज्नुहोस्